Hapana doro paMitambo: Tokyo Olimpiki inoenda isina doro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Japan Nhau » Hapana doro paMitambo: Tokyo Olimpiki inoenda isina doro
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Japan Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vakuru veOlympics veTokyo sezviri pachena vakachinja chirongwa chekare chekutendera chinwiwa chinotengesa kune vanoona munzvimbo dzemakwikwi.
Varongi veTokyo maOlympic Games pakutanga vakaronga kubvumidza kutengeswa kwezvinwiwa zvinodhaka panzvimbo dzeOlympic.
Nhungamiro yevaoni veMitambo yeTokyo, ichatanga musi waChikunguru 23, ichaziviswa mukupera kwesvondo rino.
Kutengesa kwezvinwiwa zvinodhaka kunogona kurambidzwa munzvimbo dzeOlympic.
The 2020 Mitambo yeOlympic varongi pakutanga vakaronga kubvumidza kutengeswa kwezvinwiwa zvinodhaka panzvimbo dzeOlympic, paine zvimwe zvinorambidzwa, sezvo guta guru reJapan richigadzirira kutanga kwemitambo mukati memwedzi.
Asi manzwi zvaakakura achipokana nekufungisisa kuri kuita sevatsigiri vakaita seAsahi Breweries, vatambi veMitambo sezviri pachena vakachinja chirongwa chekare chekubvumidza kutengesa chinwiwa kune vanoona munzvimbo dzemakwikwi.
"Tichifunga nezvechiitiko chechiitiko ichi, komiti inoronga ichatarisa chokwadi chekuti kune vanobatika," gurukota reOlimpiki Tamayo Marukawa akadaro pakutanga kwanhasi kumusangano wenhau.
Nhungamiro yevaoni veMitambo yeTokyo, ichatanga musi waChikunguru 23, ichaziviswa mukupera kwesvondo rino. Mune runyorwa rwayo, varongi vanokumbira vateereri kuti varege kudya nekunwa vari mumapoka mumigwagwa yenzvimbo, uye kuenda nekudzoka kunzvimbo dzese vasingamire chero kupi, sechikamu chezviyero zvekudzora njodzi yekupararira kweCOVID-19.
Seiko Hashimoto, mutungamiri wedare rinoronga mitambo, akataura nezuro kuti kutengeswa kwezvinwiwa zvinodhaka kune vanoiona kuri «kutariswa» asi zvinoenderana nekuti vanhu vangadzivirirwa here kutaura zvine ruzha kana kushevedzera uye kuti vanogona here kuona zviga zvekuchengetedza pavanopinda mukati nzvimbo.
Mitemo, iripo panzvimbo yeruzhinji muJapan, ichavewo chinhu chekutarisa kana izvi zvinwiwa zvinogona kutengeswa, akadaro.
Asi vamwe vanogadzira mutemo uye nyanzvi dzezvekurapa vakaratidza kushushikana nekutengesa doro kunzvimbo dzenyika sezvo nyika iri kutambura kuti ikurumidze kuburitswa kwejekiseni reCOVID-19, uye mabhizimusi muTokyo anorwa nemitemo yekunwa doro.
Mukuru weTokyo Medical Association, akataura mumusangano wevatori venhau kuti anoda kuti varongi «vafungezve» chirongwa chiri kutarisirwa kubvumira vateereri kunwa doro, uye kutengesa kwezvinwiwa zvinodhaka hakufanirwe kubvumidzwa munzvimbo dzeOlympic.
NeMuvhuro, varongi vakasarudza nzvimbo dzinogona kuzadzikiswa kusvika makumi mashanu kubva muzana emagetsi, kusvika vanosvika zviuru gumi zvevatariri, zvichitevera mwedzi yehurukuro pamusoro pevapindi vevateveri vemuno. Vataridzi vanobva mhiri kwemakungwa vakanga vatovharirwa.
India Tourism inotenda zororo rehurumende kubva ...
Wechidiki mukadzi wemuAfrica anokunda Mount Everest
Shanduko Yemamiriro ekunze Chokwadi cheFlorida Condo Kudonha ...